I-Domaine des Abers enezinkanyezi ezintathu, indawo yokubhukuda efudunyeziwe nehlanganisiwe. - I-Airbnb
I-Domaine des Abers enezinkanyezi ezintathu, indawo yokubhukuda efudunyeziwe nehlanganisiwe.
Plouguin, Bretagne, i-France
Gxila enhliziyweni kaFinistère ... i-Domaine des Abers kanokusho kanye nezakhiwo zayo zamatshe ezakhiwe ngo-1890 zinikezwe ngendlela yesimanje ehlanganisa ubuhle, ukunethezeka, indawo kanye nokuphila kahle.
Lesi sakhiwo esihlanganisa ubuhle nobuqiniso bezakhiwo zepulazi ezindala ngokunethezeka kwesimanje kuzokuyenga.
Idamu lokubhukuda elingaphandle elimboziwe nelishisayo (kusukela ngo-Ephreli kuya kuNovemba) kanye nengadi enkulu engaphezu kuka-2,500 m2 ilungele ukuhlangana nomndeni nabangane.
Idamu lokubhukuda elingaphandle elimboziwe nelishisayo (kusukela ngo-Ephreli kuya kuNovemb…
“I-Domaine des Abers itholakala endaweni eqhele ukuphonswa kwetshe ukusuka olwandle kanye namabhishi anesihlabathi esikhulu.”
– Arnaud, umbungazi wakho
Imipheme eyenza ikamelo libe mnyama, Umbhede owusofa, umbhede oyidabuli
Umbhede owusofa, umbhede oyidabuli
5.0 (izibuyekezo ezingu-15)
I-Domaine des Abers itholakala endaweni ethulile futhi eluhlaza eduze nogu lwezinganekwane nezinsiza. Thola izwe lama-Abers, futhi ujabulele amabhishi esihlabathi esimhlophe kodwa nama-cove amaningi amancane. Ukudoba ngezinyawo, ukuhamba ngomkhumbi kanye nohambo lwe-kayaking kuzogcizelela izinsuku zakho.
Ibanga ukusuka e- Brest Bretagne Airport
Imizuzu engu-22 oyihamba ngemoto uma ukuminyana kwezimoto kungekho emgwaqeni
Inombolo yepholisi: 538946443
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$1073.
Hlola ezinye izinketho ezise- Plouguin namaphethelo